“Maalmo gudahood ayaan dowlada kala hadli doonaa qaabkii dib loogu soo celin lahaa taageerayaasha garoomada” – Javier Tebas – Gool FM
“Maalmo gudahood ayaan dowlada kala hadli doonaa qaabkii dib loogu soo celin lahaa taageerayaasha garoomada” – Javier Tebas
(Spain) 12 Juun 2020. Madaxweynaha La Liga ee Javier Tebas ayaa wuxuu carabka ku adkeeyay in maalmaha soo socda uu dhici doono shir ay isugu imaanayaan wakiilo ka socda maamulka horyaalka iyo dowladda Spain.
Shirkan ayuu sheegay Javier Tebas in looga wada hadli doono qaabkii ay taageerayaasha dib ugu soo laaban lahaayeen garoomada xilli ciyaareedkan, kaddib markii dib loo daahfuray tartanka, maadaama mudo dheer loo joojiyay sababa la xiriira caabuqa Coronavirus.
Wargyska “Marca” ee dalka Spain ayaa wuxuu shaaca ka qaaday wareysi uu dhawaan bixiyay Madaxweynaha La Liga ee Javier Tebas, waxaana hadaladiisa ka mid ahaa:
“Dawladu waxay horey u soo saartay sharciyo ah qaabkii dib loogu soo celin lahaa taageerayaasha garoomada”.
“Dhamaanteen waa inaan la shaqeyno wasiirka Isboortiga iyo maamulada maxaliga ah iy maamulka La Liga, si aan uga wada shaqeyno inaan dhameystirno soo laabashadaas”.
“Marka 10 ama 15 maalmood la dhaafo, waxaan la fariisan doonaa dowlada si aan isugu dayno inaan dib ugu soo celino taageerayaasha garoomada”.
“Haddii aan heysano cel celis ahaan soo laabasho ah 10% ama 15% aad ayaan u faraxsanaan doonnaa”.
Si kastaba ha noqotee, horyaalka La Liga ayaa dib loo ciyaaray xalay oo Khamiis ah, waxaana lagu daah furay, kulankii dhex maray kooxaha Seville iyo Real Betis, iyadoo 2-0 ku adkaatay Seville, wuxuuna ka dhacay garoonka Ramon Sanchez Pizjuan iyadoo aan wax taageerayaal ah aysan soo xaadirin.
“Pogba waa mid ka mid ah ciyaartooyda ugu fiican adduunka, taasna waa waxa ay u baahan tahay Man United” – Louis Saha